Dhito Patra :: बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपूर्व ब्रोकरले शाखा बढाउन पाउनुपर्छ
Interviewee: Bharat Ranabhat
पूँजीबजारमा हाल ५० ब्रोकर कम्पनीले धितोपत्रको काम गर्दै आएका छन् । अहिले बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पूँजीबजार पहुँच बढाउने तयारी सरकारदेखि पूँजीबजार नियामकसम्मको छ । यो अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि ब्रोकरहरूलाई शाखा बढाउन दिनुपर्ने माग ब्रोकरहरूको छ । प्रस्तुत छ, ब्रोकरहरूको यही माग र साझा समस्याको विषयमा स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटसँग आर्थिक अभियानकी प्रजिता बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार:
बजार बढेसँगै ब्रोकरको व्यवसाय चम्केको हो ?
बजार बढेसँगै यसका स्टेक होल्डरहरू लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सरकार जति पनि छन्, ती सबैलाई फाइदा हुन्छ । जब बजार बढ्छ, कारोबार पनि बढ्ने गर्छ । कारोबार बढेपछि पक्कै पनि ब्रोकरहरूको आम्दानी बढ्छ । ब्रोकरहरूको आम्दानीको एउटा मात्र स्रोत शेयर कारोबार हो । अहिले कारोबार बढेको अवस्थामा अवश्य पनि ब्रोकरहरूको व्यवसाय केही हदसम्म चम्किएको छ ।
धितोपत्र किनबेचमा वैशाखदेखि प्यान अनिवार्य गरिएको छ ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
धितोपत्रको दोस्रो बजारका संस्थागत लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै प्यानको प्रयोग गर्दै आएका थिए । ठूला लगानीकर्ता धेरैसँग पहिले नै प्यान थियो ।
130,503,497 426,786 1,448
4,044,910 29,558 117
42,850,504 182,461 42
7,816,090 12,547 77
9,771,770 20,087 112
27,310,758 143,292 2,787
179,754 118 4
11,356,772 26,631 218
17,275,532 87,483 352
2,189,732.46 271,893 20
SABSL 320 5.96
CLBSL 525 5.422
DHPL 60 5.263
RHPC 88 4.762
NEF 8.11 3.841
SLBSL 740 3.497
JBBL 162 3.185
RADHI 140 2.941
NGPL 115 2.679
CEFL 116 2.655
SFFIL 261 -4.745
BBC 1,494 -3.675
NICL 298 -3.247
LVF1 9.15 -3.175
EIC 320 -2.736
JFL 190 -2.564
PICL 460 -2.128
KSBBL 142 -2.069
GMFBS 527 -2.045
BPCL 384 -2.041
NICA 19,140,811 454
PRVU 16,677,551 266
ADBL 12,073,166 428
DBBLPO 9,862,350 75
NBL 8,787,746 325
NIB 7,957,743 466
MLBL 7,416,657 212
RHPL 6,318,507 200
SHIVM 6,214,325 577
NBB 6,009,800 213